Soo dejisan YouTube 10.34.57 – Vessoft
Soo dejisan YouTube
YouTube – software ah aad u aragto video adeegga caanka ah YouTube. Software The kuu ogolaanayaa inaad subscribe in siyaabo kala duwan u arkaan warbaahinta online, ku dar, qiimeeyo iyo comment video. YouTube u saamaxaaya in ay baadhaan video magac ama qaybaha loo jecel yahay. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u aragto video ku jira HD la taageero subtitles. YouTube u saamaxaaya in ay nidaaminaya size daaqadda video ah, oo awood ku haboon oo leh waxyaabo kale oo ka shaqeeya software ah halka daawashada. Software ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto link of video maraya codsiyada kale ee ku lug leh qalabka user ka.
Daawashada raaxo ah ee video
Support of HD iyo subtitles
Kartida ay u qiimeeyaan iyo comment video
Dejisa size suuqa kala of video ah ee
YouTube Software la xiriira:
English, Українська, Español, Português... Hay Day 1.29.98
العربية, English, Français, Español... Onavo Count 2.7.2